निर्माण को लागि सीएनसी इस्पात पिंजरे वेल्डिंग मिसिन इस्पात रोल सीम welder उपयोग - Jxmachinery.com
पाइल पिंजरे बनाउने मेसिन 12m-27m स्वचालित रूपमा पाइल पिंजरा प्रक्रिया गर्न सक्दछ। निर्माणको आवश्यकताको आधारमा, अक्षांशीय पुन: पछाडि आस्तीनमा सम्मिलित गरिनेछ जुन घुमाईएको डिस्कमा स्थिर हुन्छ, चम्किलो सर्कल तार लिन्छ र यसलाई एक भिटामिन रिबेरमा वेल्डिङ गर्दै गर्दा, जब चालक र घूर्णन डिस्क रोलिंग रिबराको वरिपरि टाईपहरू, जब डिस्क चल्दै छ, यो घिमिरे पनि हुन्छ, त्यसपछि यो ढेर पिंजरे हुनेछ। यो प्रोग्रामयोग्य तार्किक नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रण गरिएको छ, शक्ति सर्वो मोटर द्वारा प्रदान गरिनेछ। पिंजरेको अधीनमा हाइड्रोलिक लिफ्टिंग उपकरण पनि समर्थन गर्दै छन्, वेल्डिङ बन्दूकहरू क्रम अनुसार स्वचालित रूपमा काम गर्न सक्दछ।
स्वचालित पिंज वेल्डिंग मिसिनहरु इकाई निर्माण प्रणालीको रूपमा डिजाइन गरिएको छ जसले हाम्रो ग्राहकहरूलाई व्यक्तिगत चासो र आवश्यकतालाई विचार गर्न लचीला हुन सक्षम बनाउँछ। स्वचालित पिंज वेल्डिंग मिसिन को बहुभुज सुदृढीकरण पिंजरों को उत्पादन को एक विशेष संस्करण पनि राम्रो तरिकाले बेचन गर्दछ। यो मेशिन संग, स्तम्भहरु र समर्थन बीम को लागि सुदृढीकरण पिंजरों संग साथै प्रबलित कंक्रीट तत्वहरु, आधार नील आदि को निर्माण गर्न सकिन्छ।
उत्पादन विशेषता / विशेषताहरू:
1. उच्च स्वचालन
यो कम्प्युटर द्वारा नियन्त्रित छ र टच स्क्रीन मा काम गर्दछ, यस बीच, वेल्डिंग बन्दूकहरु द्वारा स्वचालित रूप देखि वेल्डिंग।
2. छिटो वेल्डिंग
वेल्डिङ बन्दूकहरू द्वारा स्वचालित रूपमा वेल्डिङ, एक भेल्डिङ बिन्दु मात्र एक सेकेण्ड लिन सकिन्छ, यो तीन वा चार पटक छिटोथान पारंपरिक कृत्रिम मोड हुन सक्छ।
उच्च गुणस्तर वेल्डिंग बिन्दु, सटीक पुनःबर्धारित स्पेसिंग, राम्रो सिंक्रोनाइटीज। सही चन्द्रमापन सर्कल तार स्पेसिङ द्रुत बट वेल्डिंगको लागि आधार प्रदान गर्दछ।
श्रमको तीव्रता घट्यो
दुई वा तीन जना कर्मचारीहरूले यो मेसिनमा राम्रो काम गर्न सक्छन्
कार्यकर्ता छोटो प्रशिक्षण पछि यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छ।
6. उच्च अनुकूली क्षमता
यो 12-50mm द्वारा पुन: पट्टी संग ढेर पिंजरे वेल्डिंग मा लागी, लंबी अवधि को सर्कल तार स्पेसिंग स्वचालित रूप देखि समायोजित गर्न सकिन्छ। ढिला पिंजराको लम्बाइ 12 एम-27 मिनेट हो।
आवश्यकता अनुसार, डबल मुख्य प्रवर्तन वा बट वेल्डिंग को साथ ढेर पिंजरे अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
8. सहकारी परिवहन र स्थापना
यो मोड्युल डिजाइन छ, कच्चा माल यन्त्र, मुख्य इन्जिन र टेलिभिजन उपकरण डिस्ट्याउन सकिन्छ, यसको प्रत्येक भागलाई हटाउन सकिन्छ।
1. कर्मचारी आवंटन: सामान्य परिस्थितिमा,5देखि6व्यक्तिले टोलीको रूपमा काम गर्न सक्छ।
विशिष्ट आवर्ती निम्नानुसार छ:
तयारी र खानेकुरा सामग्री:2व्यक्ति
रोल वेल्डिंग: 1 ~2लोगो
हूपलाई बलियो पार्दै:2व्यक्ति
विशिष्ट कर्मचारी को आकार र इस्पात पिंजरे को मोडेल मा आधारित हुनु पर्छ।
2. उत्पादन क्षमता
3. इस्पात पिंजरे टेम्प्लेट
नाम: कंक्रीट को लागि उच्च गुणवत्ता सीएनसी पिंजरे वेल्डिंग मिसिन
उत्पादन को नाम: कंक्रीट को लागि उच्च गुणवत्ता सीएनसी पिंजरे वेल्डिंग मिसिन
भोल्टेज: 380V / 220V (अनुकूलित)
पिंजरा लम्बाइ (एम): 2-12 (अनुकूलित)